जाडो यहाँ छ! के म एक थर्मोस्टेटिक स्नान किन्नु पर्छ? विशेषज्ञहरु सुन्नुहोस्, आश्चर्य छैन यति धेरै मानिस परिवर्तन गर्न चाहन्छन् !!!
घर / ब्लग / जाडो यहाँ छ! के म एक थर्मोस्टेटिक स्नान किन्नु पर्छ? विशेषज्ञहरु सुन्नुहोस्, आश्चर्य छैन यति धेरै मानिस परिवर्तन गर्न चाहन्छन् !!!
2021 / 01 / 15 वर्गीकरणब्लग 6466 0
बाल्यावस्थादेखि वयस्कपनसम्म नुहाउने खाडलहरूको सन्दर्भमा, यो कुरा गर्न दुखको कुरा हो।
नुहाउने ठाउँमा, यो पत्ता लगाईयो कि तातो पानी छैन!
जे भए पनि, अन्तिम प्रश्न हो: राम्रो नुहाउन किन यत्तिको गाह्रो छ?
भन्न सकिन्छ कि शावर, वास्तवमा, रड, नल, नोजल सहित एकदम सरल, शीर्ष स्प्रे र हात स्प्रेमा विभाजित।
तर केहि मानिसहरू भन्छन्, मैले राम्रा राम्रो प्रयोग खरीद गर्नका लागि दस युआन खर्च गरे। नुहाउने फुटेको छ, र त्यसपछि नयाँ स्नान प्रतिस्थापन गर्नुहोस्, र तपाईंले चोट गर्नुहुन्न। जब सम्म तपाईं यसलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए, त्यहाँ केहि गलत छैन, तर अन्तमा अनुभव समान छैन।
यो जस्तो छ, स्टीम्ड बन्सको c० सेन्ट, तपाईं पर्याप्त खान सक्नुहुन्छ, हजारौं युआन मिशेलिनले पनि पर्याप्त खाए। दुबै भरिएको छ, तिमीलाई के खान मन पर्छ?
कुञ्जी परिणामहरूमा होइन, तर प्रक्रियाको आनन्दमा। आज हामी नुहाउने बारेमा कुरा गर्नेछौं ~
एक शावरहेड्सका प्रकारहरू
सामान्यतया, बजारमा अहिले दुई मुख्य प्रकारका स्नानहेडहरू छन्: थर्मोस्टेटिक र सामान्य। धेरै जसो निर्विवाद चीजको खरीदमा, थाहा छैन कि तिनीहरूले एक थर्मोस्टेटिक स्नान छनौट गर्छन् कि साधारण स्नान। यी दुईबीच के भिन्नता छ?
साधारण नुहाउने, यसको मूल तापक्रमोस्पुल स्पूलको सिरेमिक टुक्रा हो, पानीको तापक्रम समायोजन गर्न वरिपरि घुमाएर, पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न माथि र तल स्विंग गरेर। यो धेरै सुविधाजनक र प्रयोग गर्न द्रुत छ।
तर प्राय: जसो वर्षाको प्रयोग गर्नाले समस्या भेटिन्छ, जाडोको स्नानमा पानीको तापक्रम निश्चित तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो किनभने सामान्य स्नान नल चिसो पानी र तातो पानी मिश्रण छ पानी को तापमान समायोजित गर्न को लागी हो। एकपटक तातो वा चिसो पानीको पानीको दबाव परिवर्तन भयो भने, पानीको तापक्रम स्वाभाविक रूपमा अस्थिर र तातो र चिसो हुनेछ।
र अपग्रेड गरिएको थर्मोस्टेटिक स्नान, स्पूललाई ​​नलद्वारा यसको आफ्नै थर्मोस्टेटको साथ समायोजन गर्न सकिन्छ। चिसो र तातो पानीको दबावको स्वचालित सन्तुलन, ताकि पानीको तापक्रमको स्थिरता कायम राख्न।
सुरक्षा दृष्टिकोणबाट, सामान्य नुहाउने तापमान नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। वयस्क नुहाउने ठीक छ, समयमै प्रतिक्रिया दिन सक्षम छ। यदि यो बुढो वा बच्चाहरू नुहाउँदै छन् भने, गम्भीर परिणामहरूको साथ यसलाई टाँसिन सजिलो छ।
थर्मोस्टेटिक नुहाउने स्वत: सन्तुलनको तापक्रममा सेट गर्न सकिन्छ, जसले स्केल्डिंगको सम्भावनालाई कम गर्दछ। र नलको भित्री भित्तामा एन्टी-स्काल्ड उपचार पनि गरियो। यदि तपाईं गल्तिले नललाई छुनुभयो भने पनि तपाईं स्नान्ड हुनुहुनेछैन, शावरको सुरक्षालाई सुधार गर्नुहोस्।
थप रूपमा, स्नानलाई ह्यान्डहेल्ड स्नान, शीर्ष स्प्रे स्नान र साइड स्प्रे स्नानमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ह्यान्डहेल्ड वर्षा सबैभन्दा सामान्य र सबै भन्दा बहुमुखी हुन्। सामान्य परिवारले स्नान गरे, सामान्यतया ह्यान्डहेल्ड स्नानलाई जनाउँदछ। यो नुहाउन प्रयोग गर्न सजिलो छ, स्थिर सीटको साथ शरीरको सबै भागहरू धुन्छ, शीर्ष स्प्रे स्नानको समारोह पनि प्राप्त गर्न सक्छ, धेरै लागत प्रभावी।
अब अधिक र अधिक घरहरू शीर्ष स्प्रे स्नानले सुसज्जित छन्। यस नुहाउने को आकार ठूलो छ, सामान्यतया inches इन्च भन्दा बढीमा, केहि लम्बाई र चौडाई १ मिटर भन्दा बढि हुन सक्छ। शीर्ष स्प्रे स्नानले वर्षा, पानीको धुवाँ र अन्य पानीको आउटलेट हासिल गर्न सक्छ, ताकि प्रयोगकर्ता प्रकृतिमा जस्तो छ, पानीको सिधा प्रत्यक्ष स्पर्श महसुस गर्दछ।
साइड स्प्रे शावर
साइड स्प्रे स्नान भित्तामा स्थिर गर्नु आवश्यक छ, छेउबाट पानी छर्कने, यसको सहायक गुणहरू ठूला छन्, मुख्य रूपमा मालिश कार्य प्राप्त गर्न। केही साइड स्प्रे स्नानले माथि र तल, बाँया र दायाँ वा अनियमित पानी डिस्चार्ज प्राप्त गर्न कोण समायोजित गर्न सक्दछ, तपाईं पूरै शरीर कुल्ला र मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। साइड स्प्रे नुहाउने प्राय: छुट्टै बिक्री हुँदैन, प्राय: लुकाइएको नुहाउने प्रणाली वा नुहाउने सेटको अंशको रूपमा बेचिन्छ।
दोस्रो, पानी नुहाउने को बाहिर आउँछ
नामले देखाउँदछ, प्राकृतिक पानी कुनै पनि उपचार बिना, सबैभन्दा प्राकृतिक तरिकामा स्प्रे गरिएको पानी हो। नुहाउने सिलिकॉन प्वालबाट छिचोल्नुहोस्, पानी आफैंमा केही दबाबका साथ, सम्पूर्ण शरीरलाई पखाल्न सक्नुहुन्छ, पानीको सबैभन्दा साधारण तरीका हो।
एयर बुलबुले पानी
त्यहाँ नुहाउने भित्र भित्र जलमार्ग छन्। पानीको उच्च-गति प्रवाहले हवाको बहाव चलाउँछ र पानीको स्तम्भमा मिसिन्छ। यसले मूल स्प्रे पानीलाई टिप्ने पानीमा परिणत गर्दछ। बबल पानी पूर्ण र नरम छ। पानी शरीरमा बगेर गएपछि, शरीरमा बाँकी रहेका स-साना बुलबुले फुट्न जारी राख्छन् र जाडोको फोर्सो ल्याउँछ।
मसाज पानी मालिश पानी प्वालमा केन्द्रित पानी प्रवाह हो। मसाज प्वालमा रोटर छ जुन मोडिन सकिन्छ। रोटर पानीको बहावको प्रभावबाट चालित हुन्छ र पानीको प्रवाहको आवर्तीको केही अंश काटेर पानीको दालहरू उत्पादन गर्दै नुहाउने भित्रको वेगको वेगमा घुम्छ। पानीको त्यस्तै स्प्लैशले शरीरमा मसाज भूमिका खेल्न, तथाकथित मालिस पानी भनिन्छ।
स्प्रे पानी किनभने प्यानलमा स्प्रे प्वाल विशेष डिजाइन गरीएको छ। धुंध स्प्रे बाहिर पानी प्रवाह। कुहिरो पानीको ठूलो क्षेत्र छ, र पानी धुवाँमा रहनाले प्रदर्शनकर्तालाई एक फरक अनुभव दिन्छ।
अधिकतर ओभरहेड शॉवरहेड्समा देखिने, सिद्धान्त भनेको पानी आउटलेट प्वाललाई पट्टीमा परिवर्तन गर्नु हो। पानी मूल पातलो प्वालबाट स्ट्रिप आउटफ्लोमा छर्किएको छ। मानिसहरू तल झर्छन् मानौं प्राकृतिक झरना पानी तलको भावनाबाट।
केही वर्षाले केवल पानीको बिभिन्नता बीच स्विच गर्न सक्दैन, तर एकै समयमा दुई वा बढी तरिकामा। उदाहरण को लागी, पानीलाई मिसाउने सबैभन्दा साधारण तरीका बबल पानी संग प्राकृतिक पानी हो।
तेस्रो, नुहाउने गुण
जब नुहाउने छनौट गर्दा पानीको परीक्षण गर्नु पर्दैन, केवल आँखा र हातले छोएर। मुख्य ठाउँहरू सिलिकॉन ग्रेन सीमहरू, र प्लेटि are हुन्।
एक ह्यान्डहेल्ड स्नान खरीद गर्दा, पानी आउटलेट प्वालमा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आउटलेटको गुणस्तरले स्नानबाट स्प्रे गरिएको पानीको स्तम्भ सन्तुलित हो कि होइन, अवस्थाको गहनता बिना वा निर्धारण गर्छ। नुहाउने को पानी आउटलेट सामान्यतया सिलिकॉन बाट बनेको हुन्छ। गुणस्तरयुक्त पानी आउटलेट प्वाल सफा, चिल्लो र नरम छ। यो सिलिकॉन अन्न मात्र पानी आउटलेट को गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न सक्दछ, र हेरविचार बिना सफा।
नुहाउने सिवन स्थानको "शिल्प कौशल" को सबैभन्दा प्रतिबिम्बित हुन्छ। राम्रो सिम तंग हुनुपर्दछ र दूरी सानो हुनुपर्दछ, जसले गर्दा पानी चुहावटलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न र उत्पादको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
प्लेटिंग सतह एक नुहाउने को स्थायित्व को एक मापन हो वा छैन। राम्रो प्लेटि surface सतह चिल्लो हुन्छ, राम्रो दाग बिना नै, र छोएर गम्भीर महसुस हुँदैन। किनमेल गर्दा, तपाई बत्तीलाई शाऊलको मुनि राख्न सक्नुहुन्छ र ध्यानपूर्वक जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले खरोंचहरू वा असमानता फेला पार्नुभयो भने, यस स्नानको सेवा जीवन पनि धेरै कम हुनेछ।
चौथो, स्नान चयन कौशल
स्प्रे प्रभाव हेर्नुहोस्
बाहिरबाट, नुहाउने जस्तो आकार उस्तै देखिन्छ। एक चयन यसको स्प्रे प्रभाव मा हेर्नु पर्छ, एक राम्रो स्नान सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रत्येक साना स्प्रे प्वाल सन्तुलित र एकरुप छ। बिभिन्न पानीको चापमा, यसले सहज नुहाउने प्रभाव निश्चित गर्न सक्छ। छनौट गर्दा, तपाईं पानीको जेट पनि छ कि भनेर हेर्न पानी परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ।
स्प्रे गर्ने विधिमा हेर्नुहोस्
शावरहेड्सको आन्तरिक डिजाइन पनि भिन्न हुन्छ। ह्यान्डहेल्ड स्नानको चयनमा, यसको स्प्रे प्रभावको अतिरिक्त, ह्यान्डहेल्ड स्नान स्प्रे विधिमा क्रमशः वृद्धि, मसाज पनि हुन्छ। सामान्य स्प्रे विधिले अधिक आदर्श स्नानको आनन्द ल्याउन सक्छ। ह्यान्डहेल्ड स्नान उपयुक्त स्प्रे मोडको मुड अनुसार चयन गर्न सकिन्छ: प्राकृतिक र रमाईलो वर्षा स्नान प्रकार, जीवन्त मालिश प्रकार, आरामदायक र न्यानो स्प्रे प्रकार, चिल्लो र नरम पानी स्तम्भ प्रकार, ड्रिप प्रकारको पानी बचत राज्य।
सिरेमिक भाल्भ कोर हेर्नुहोस्
भल्भ कोरले स्नान भावना र सेवा जीवनको प्रयोगलाई असर गर्छ। राम्रो स्नानले सिरामिक स्पूल, चिल्लो र घर्षणविहीन प्रयोग गर्दछ। हात को छनोट मा स्विच मोड़ गर्न सक्छन्, सहज, सहज महसुस गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी उत्पादन मा एक चिकनी र विश्वसनीय प्रदर्शन कायम गर्न को लागी।
सतह प्लेटि Atमा हेर्नुहोस्
शावर प्लेटि good्ग राम्रो वा नराम्रो हो, गुणवत्ता र सेवा जीवनलाई प्रभावित गर्नका साथै सामान्य सफा-सफाईलाई पनि असर गर्दछ। स्नान सामान्यतया सतह क्रोम प्लेटि is हुन्छ। राम्रो प्लेटि 150 १ 1० सी - मा उच्च तापमान १ घण्टाको लागि कायम गर्न सकिन्छ, कुनै छाला, कुनै झिम्काइ, कुनै क्र्याकिंग र पिलिंग घटना। २ hours घण्टा एसिटिक एसिड नुन स्प्रे परीक्षण कोरोड हुँदैन। छनौटमा यसको चमक र चिल्लोपनमा देख्न सकिन्छ, उज्यालो र चिल्लो स्नानले वर्दी प्लेटि,, राम्रो गुण दर्शाउँछ।
जाडो यहाँ छ, थर्मोस्टेटिक नुहाउने को सेट प्राप्त गर्न हतार गर्नुहोस्, घरमा पनि हरेक दिन SPA गर्न सक्छ!
अघिल्लो :: घरको बाथरूम सुन्दर बन्न डिजाइन गर्नुहोस् र प्रत्येक दिन नुहाउने ठाउँमा राम्रो मुड गर्नुहोस् अर्को: यदि बाथरूम Squ स्क्वायर मिटर भन्दा कम छ भने, भिजेको र सुख्खा विभाजन मलाई हराउन गाह्रो छैन!
2021 / 01 / 15 5677